UZikalala weseka umsebenzi wabeKZN Climate Change and Sustainable Development Council – Sivubela intuthuko Newspaper
UNDUNANKULU waKwaZulu Natal, uMnuz Sihle Zikalala owethule uhlelo lokulekelelwa kosomabhizinisi bakulesi siFundazwe abasafufusa.
UNDUNANKULU waKwaZulu-Natal uMnu Sihle Zikalala uthi uma ingathathelwa phezulu eyokuguquguquka kwesimo sezulu kusenesikhathi isifundazwe sizozithola sibhekene nengwadla kwezomnotho okufana nokuye kwenzeka njengoba kubheduke iCOVID-19 emhlabeni okugcine kukhinyabezeka umnotho emhlabeni wonke.
UMnu Zikalala uthe eyokuguquguquka kwesimo sezulu idinga ukubukwa ngokujulileyo ngoba kuthinta zonke izinhlaka ezisimamisa umnotho ukuze izwe lithuthuke. Ubekhuluma engqungqutheleni yeKZN Climate Change and Sustainable Development Council. Le ngqungquthela yesifundazwe ebiseNkosi Albert Luthuli Convention Centre eThekwini beyihanjelwe nguNgqongqoshe woMnyango wezokuThuthukiswa koMnotho, ezokuVakasha, nezeMvelo KwaZulu-Natal uMnu Ravi Pillay, izimeya zezifunda, abamele imikhakha yezamabhizinisi ngokuhlukana kwayo nabaholi bomdabu esifundazweni.
UKhuzeni uthe okwesimo sezulu esingazinzile kuphoqa ukuthi kukhona konke ekwenziwayo kuqinisekiswe ukuthi kuvikelwa lokho okungamagugu okungathikameza imvelo. Ubalule ukunukubezeka komoya njengenye yembangela yokuguquguquka kwesimo sezulu okugcina kuphazamiseka izinto eziningi. “Ukubhekelwa kwezinzisa kusebenza ezintsha zesimanjemanje kumele kuqinisekiswe ukuthi kuza namathuba amasha azothuthukisa amakhono abantu nokugcina imvelo ingathikamezekanga. Lokhu kuhlangana kwethu kanjena kulandela esasinakho ngo-2019 lapho kwaphakanyiswa ezinye zezinto okumele kusetshenzwe phansi kwazo ukuhlenga imvelo ekuguquguqukeni kwesimo sezulu ukuze singazitholi sihlwempu kwezomnotho siyisifundazwe,” usho kanje.
UMnu Pillay unxuse isifundazwe ukuthi masibambane silwe nesimo sezulu senze njengoba senza kwakuzanywa ukutholwa ikhambi lokudambisa igciwane lesandulela ngulazi okwagcina kusungulwe iKwaZulu-Natal Provincial Aids Council. “Kuzosisiza ukuthi izifunda zisebenze ngokuzikhandla futhi zibike njalo ngezinhlelo ezinazo zokubheka isimo sezulu zengoba zazenza kwi-AIDS Council. Lokho kuzosisiza ngokuthi sibone ukuthi izinhlelo zethu zihamba kanjani nokuthi likhona yini ushintsho ngezinhlelo esinazo. Lokho kuyokwenza umsebenzi wethimba ubonakale ukuthi ubalulekile ngoba kuzobe kukhona okuphathekayo okwenziwayo,” usho kanje.